Fitaovana fanariana hafa - Casting Minghe
Ny firaka varahina amin'ny zinc ho singa mampangaroharo lehibe dia matetika antsoina hoe varahina. Ny firaka binary-zinc dia antsoina hoe varahina mahazatra, ary ny varahina ternary, quaternary na multi-element vita amin'ny alàlan'ny fanampiana singa kely hafa amin'ny firaka varahina-zinc dia antsoina hoe varahina manokana. -Zn firaka mimari-droa. Ny elanelan'ny mari-pana kristaly dia kely ary tsara kokoa ny fanatanterahana azy. Raha ampitahaina amin'ny varahina varahina dia manana toetra mekanika ambony kokoa ny varahina. Ankoatr'izay, satria ny varahina dia misy zinc marobe, dia ambany ny vidiny. Ireo no antony ampiasaina be dia be ny casting varahina.
Ny titanium nandrendrika, aorian'ny fahamaimamoana tafahoatra, dia arotsaka ao amin'ny efi-trano famonoana amin'ny alàlan'ny fandrarahana ny lovia ao anaty kaopy. Eo ambanin'ny tsindry ny tehina piston, ny titanium misy rano dia miditra ao amin'ny lavaka famonoana maty avy amin'ny lavaka famonoana maty. Ny casting casting dia voatazona ao amin'ny lavaka famonoana maty ary mangatsiatsiaka alohan'ny hamoahana azy. Esory ireo kilema ambonimbony, toy ny fisarahana mangatsiaka, mari-drano na as-cast, indrindra ny sisiny manify. Ny famoahana ny maty dia tokony hafanaina alohan'ny famoahana ny maty. Ny famoahana maty dia atao ao anaty loaka famonoana maty ary ampangatsiahina alohan'ny hamoahana azy.
Ny vy vy dia azo zaraina ho vy vy firaka sy vy vy mandatsa arakaraka ny firafitry ny simika. Ny fanariana vy dia manondro ny fizarana natokana ho an'ny famokarana vy vy. Cast vy dia tokony hampiasaina raha ny tanjaky ny casting dia somary avo ary ny fampiasana vy dia tsy afaka mahafeno ny fepetra takiana. Na izany aza, ny fahamendrehana vy vy dia tsy tsara toy ny vy manipy, noho izany ny hatevin'ny firafitry ny fanariana dia tsy tokony ho kely loatra, ary ny endrika tsy tokony ho sarotra loatra. Rehefa voafehy amin'ny fetra farany ambony ny atin'ny silika dia azo hatsaraina ny fihenan'ny vy vy.
Ny silica sol dia manamboatra casting vy tsy misy fangarony dia an'ny casting casting na casting casting. Izy io dia fizotran'ny fanariana miaraka amin'ny kely na tsy misy fanapahana ary teknolojia fizotra tena tsara amin'ny indostria fananganana vy. Tsy mety amin'ny famoahana karazana sy alloys isan-karazany fotsiny izy io, fa koa mamokatra casting miaraka amina refy avo lenta kokoa sy kalitao ambonimbony noho ny fomba fanariana hafa. Na ny fomba fanariana hafa aza dia sarotra ny manipy sarotra, mahazaka hafanana avo, ary sarotra ny manodina casting. Azo alefa amin'ny fandefasana fampiasam-bola.
Ny vy vy dia teny ankapobeny ilazana firaka vy sy karbaona ary silika indrindra. Amin'ireny firaka ireny, ny atin'ny karbaona dia mihoatra ny habetsany azo tazonina amin'ny vahaolana matanjaka austenite amin'ny mari-pana eutectic. Ny vy manipy dia misy vy vy volondavenona, vy vy fotsy, vy malleable vy, vy natsipy vy, vy vy grafitaly vy, vy natsipy vy sns. Ny fanariana vy dia marefo ary mora tohina mandritra ny fizotran'ny fanariana. Eo ambanin'ny hovitrovitra sy ny fiantraikany maharitra, ny fifantohana amin'ny adin-tsaina dia mety hiteraka vaky ny akorany
Bronze am-boalohany dia miresaka momba ny firaka vita amin'ny varahina, fa fanaon'io orinasa io ny miantso alloys varahina misy alimo, silikônina, firaka, beryllium, manganese, sns. varahina, varahina silikone, varahina firaka, sns. Ny varahina fanitso dia misy atiny firakotra avo, raha ny varahina vita amin'ny vifotsy kosa dia misy atiny firakotra ambany. Ny votoatin'ny varahina varahina ampiasaina amin'ny fanodinana tsindry dia latsaky ny 6% ka hatramin'ny 7%, ary ny votoatin'ny varahina varahina dia 10% ka hatramin'ny 14%.